Klopp oo ka hadlay heshiis kordhinta Joe Gomez – Gool FM
(Liverpool) 10 Dis 2018. Macalinka kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in maamulka Reds ay Axadii ka saxiixdeen heshiis cusub difaaca da’ada yar ee Joe Gomez, kaasoo taasoo ka dhigeysa in mudada 6 sano ee soo aadan uu qeyb kasii ahaan doono safka Reds.
Liverpool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in difaaceeda da’ada yar ee Joe Gomez uu qalinka ku duugay heshiis waqti dheer ah uu ku sii joogi doono garoonka Anfield ilaa iyo 2024.
Hadaba tababare Klopp oo ka hadlayay dareenkiisa ayaa sheegay: “Waa hadal aad u wanaagsan, gaar ahaan aniga iyo guud ahaanba kooxda oo dhan, halkan waa guriga ugu fiican ee Joe Gomez, dhamaanteen waan ku faa’ideynaa heshiiskan”.
“Waxaan qabaa in Liverpool ay tahay meesha ugu fiican ee Joe Gomez, wuxuu heystaa mustaqbal fiican, wuxuu kooxdeena ka dhigaa mid awood badan”.
Gomez ayaa si wacan ugu ciyaaray Liverpool xilli ciyaareedkan, taasoo ka caawisay in tababaraha tababare Gareth Southgate uu ugu yeero xulka qaranka England, laakiin haatan wuxuu la dhibtoonayaa dhaawac soo gaaray, taasoo uu garoomada kaga maqnaan doono bisha soo aadan.
Ronaldo oo ka hadlay arinta ku saabsan in Modrić uu ku guuleystay abaal marinta Ballon d'Or 2018